लकडाउनमा जागेका स्रष्टा
केशवराज जोशी काठमाडौं, २८ वैशाख
लकडाउनले सारा विश्व नै ठप्प भएको अवस्थामा समेत कुनै क्षेत्र थप सक्रियता र नयाँ ऊर्जासहित चलायमान छ भने त्योे साहित्य सिर्जनाको क्षेत्र नै हो । जागिरमा व्यस्त सर्जकहरूका लागि वास्तवमै यो समय वरदान सावित भएको छ ।
साहित्यकारहरूले यो फुर्सदिलो अवधिको भरपूर सदुपयोग गरेका पाइन्छ । यसरी हेर्दा साहित्य सिर्जनाका लागि अहिलेको समय वास्तवमै उर्वर समय भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
यसबीचमा साहित्यकारहरूले लेख्ने काम मात्र गरेनन्, प्रविधिको उपयोग गर्नसमेत सिके । मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू प्रायः ठप्प रहेका अवस्थामा लकडाउनमा मनोरञ्जन दिने कामसमेत साहित्य सिर्जनाले गरेको पाइयो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि साहित्य नै रुचाइएको पाइन्छ । त्यसमा पनि विशेषतः छन्दका कविताहरूले छुट्टै छाप छाड्न सफल भएका छन् ।
यो फुर्सदको समयमा कतिपय सर्जकहरू नयाँ सिर्जनामा जुटेका छन् भने कतिपय पुराना अधुरा कामहरू पूरा गर्नमा व्यस्त छन् ।
साहित्यकार कृष्ण धरावासीको भनाइमा लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा धेरै काम साहित्यमा भयो । ‘धेरै साहित्यकारहरू व्यस्त थिए तर अब फुर्सदिला भए । फुर्सदमा राम्रो लेख्न सकिन्छ । विशेषतः लामो आख्यानका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ’ धरावासी भन्छन्, ‘विचार पानी जस्तै हो, समयमै त्यसको उपयोग गरिएन भने बगेर खेर जान्छ ।’ त्यसैले अहिलेको समय वास्तवमै लेखनका लागि उर्वर समय हो ।
उनी अहिले पूरै व्यस्त छन् । १ वैशाखदेखि दिनको १ घण्टा नियमित फेसबुक लाइभमा आउँछन् उनी, बिहान ९ः३० बजेदेखि । टिकटकमा साहित्यिक भिडियोहरू अपलोड गर्छन् । साथमा साहित्य सिर्जना र सामालोचनाको काम त छँदै छ । तर, अहिले उनी सबैभन्दा धेरै टिकटकले उत्साहित भएका छन् । टिकटकले नयाँ पुस्तासँग जोडिने सुवर्ण अवसर जुराएको उनको ठम्याइ छ । यसमा उनकी जीवनसाथी साहित्यकार मञ्जु विमलीको पनि साथ र सहयोग रहेको देख्न सकिन्छ ।
छन्दकवि डा. देवी नेपाल पछिल्लो समय छन्दकविताको लोकप्रियता बढेकामा मख्ख छन् । नेपालको भनाइमा घरभित्र रहनु हाम्रो बाध्यता हो तर अहिलेको समय साहित्य सिर्जनाका लागि सर्वाधिक ऊर्जावान समय पनि हो । उनका अनुसार पछिल्लो २ महिनामा जति कविता लेखिए, त्यो अनुपातमा इतिहासमै कहिल्यै लेखिएको थिएन । यस अवधिमा छोटो समयमै नयाँ साहित्यकारहरूले स्थापित हुने मौका पाएको उनको बुझाइ छ ।
देवी नेपाल अहिले आफ्ना छरिएर रहेका पुराना सिर्जना जम्मा गर्नमा व्यस्त छन् । २ वटा समालोचनाका अतिरिक्त २ वटा खण्डकाव्य र बालकाव्यको सिर्जनामा जुटेका छन् उनी । फुटकर कविता रचना त छुट्ने कुरै भएन ।
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका काव्य विभाग प्रमुख प्रा.डा. हेमनाथ पौडेल काव्य सिर्जनामा नयाँ पुस्ता आकर्षित भएकामा मख्ख छन् । उनको विचारमा पहिले साधनारत साहित्यकारहरू पहिले पनि निरन्तर साधनामा थिए, अहिले पनि साधनारत छन् । तर, लकडाउनको समयमा काव्य सिर्जनामा नयाँ पुस्तासमेत आकर्षित भएको छ, जसले साहित्यमा नयाँ आशा जगाएको छ ।
पौडेलको अहिलेको समय अध्ययन, अनुसन्धान, निबन्ध, समालोचना, फुटकर कविता लेखन आदिमा व्यतीत भइरहेको छ ।
सशक्त छन्दकवि प्रभा भट्टराईलाई पनि साहित्य सिर्जनाका लागि अहिलेको समय वास्तवमै उर्वर लाग्छ । ‘यो प्रतिकूल समयले हामीलाई नयाँ बाटो देखाएको छ । एउटा बाटो बन्द भयो भने अरू धेरै बाटाहरू खुल्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘यो लकडाउनले प्रविधिको बाटो खोलेको छ । हामीलाई प्रविधि सिकाएको छ । प्रविधिसँग नजिक ल्याएको छ ।’
भट्टराईले अहिलेको समयलाई उनकै भाषामा अरूको ज्ञान लिने कार्यमा उपयोग गरेकी छन् । अहिले उनको अधिकांश समय छोराछोरीसँग सङ्गीत सिक्नमा बित्छ ।
अधिकांश साहित्यकारहरूलाई अहिलेको समयावधि सिर्जनाका लागि उर्वर लागे पनि नियात्राकार प्रतीक ढकाललाई भने यो समय कत्ति पनि उर्वर लाग्दैन । ढकालको विचारमा एकदमै व्यस्त समयबाट निकालिएको ४-५ घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो फालाफाल फुर्सद काम लाग्ने खालको छैन ।
उनी थप्छन्, ‘समयको पहाड नै अगाडि आइसकेपछि कनिकाको पनि उपयोग नहुँदो रहेछ ।’
लकडाउनअघि दिउँसो सुत्ने बानी नभएको बताउने ढकाल अहिले दिउँसोसमेत सुत्ने बानी लागेको अनुभव सुनाउँछन् । ढकालको बुझाइमा चुनावको समयमा मतगणना सुनेझैँ अहिले कोरोनाका ‘अपडेट’ सुन्ने बानी परिसकेको छ ।
उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो असान्त माहोलमा कसरी साहित्य सिर्जना गर्न सकिन्छ ?’
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २८, २०७७, १७:४१:००